…Ny fiàsan’ ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jak.5:16. Amin’izao andro mahory mihatra amin’ny Firenena sy midona amintsika Kristiana rehetra izao, ny Foibe FLM dia mampahery sy misaotra ny Pastora rehetra izay manao...
novembre 17, 2020 -
Amin’ny anaran’i Jesosy. Kol 3:17 Araka ny fahafatantarantsika hatrany dia tsy mbola azo atao ny mamory olona marobe, noho ny hamehana ara-pahasalamana, na dia miverina miala amin’ny fihibohana tsikelikely aza isika. Na dia eo...
Araka ny fantantsika, dia tsy ho azo tanterahina ny isataona amin’ity taona 2020 ity, amin’ny maha fivoriana azy noho ny hamehana ara-pahasalamana. Na dia eo anefa izany, dia azon’ny rehetra arahina amin’ny facebook ny...
Antananarivo, faha-28 Jolay 2020 “Izay maharesy….. dia tsy hamono ny anarany amin’ny bokin’ny fiainana Aho (Apok. 3:5b) Ry havana, Hampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’i Jesosy Kristy Tompontsika. Anatin’ny fiatrehana ny Isantaonan’ny Tobilehibe Ankaramalaza...
A) Inona avy ny toetran’ity tsimokaretina Covid-19 ity ? Tsimokaretina tsy hita maso ary tsy mandeha irery fa tsy maintsy manaraka zavatra , ohatra : tànana, akanjo, vola, seza, poignet -mbaravarana, na poignet-na fiara, sns Afaka...